Global Voices teny Malagasy » Fanentanana “Alatsinany Mainty” Tao Kambodza Ho Fitadiavana Fanafahana Ho An’ireo Mpiaro Zon’Olombelona Nofonjaina · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 02 Jona 2016 6:08 GMT 1	 · Mpanoratra Mong Palatino Nandika Candy
Sokajy: Azia Atsinanana, Kambodza, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona
Ireo mpiaro zon'olombelona voafonja ao Kambodza. Sary avy amin'ny @LICADHOCanada
Isaky ny Alatsinainy, nanomboka ny 9 May tamin'ity taona ity, manainga ny daholobe ireo mpikatroka ao Kambodza mba hitafy mainty ho fanohanana ny fanentanana iray handresena lahatra mba hamotsorana ireo mpiaro zon'olombelona naiditra am-ponja.
Natao  ny “Alatsinainy Mainty”, taorian'ny nisamboran'ny polisy ireo manampahefana efatra avy amin'ilay vondrona mpiaro zon'olombelona ADHOC, sy manampahefana iray amin'ny resaka fifidianana, nampangaina ho nanao kolikoly taminà ramatoa iray mba hampanginana azy manoloana ny raharaha ‘firaisana ara-nofo’ maha-voarohirohy an'i Kem Sokha, mpitarika faharoa isan'ny manandanja indrindra amin'ireo mpanohitra ao amin'ny firenena. Itrikitrihan'ny ADHOC fa ny resaka fanampiana araka ny lalàna ihany no ataon'ilay vondrona ho an'ilay ramatoa, ao anatin'ny asa maha-mpisolovava azy.
Ny fitànana ireo mpikatroka sy ny vesatra heloka bevava anenjehana ireo mpanao politika avy amin'ny mpanohitra dia nanainga ireo vondrona samihafa hivondrona mba hanangana ny fanentanana “Alatsinainy Mainty”, izay nohosoran'ny governemanta ho “fikomiana an-tanandehibe”. Nandrahona ihany koa ireo manampahefana fa hisambotra  mpikatroka bebe kokoa, raha toa natao tsy nahazoana alàlana ireo hetsi-panoherana. Nilaza tamin'ireo mpikatroka aza ny polisy fa tsy maintsy mahazo  ny fanomezandàlana avy amin'ny fanjakàna ry zareo alohan'ny handefasan'izy ireo  fomba fijery mifanohitra ao amin'ny Facebook.
Afaka jerena ety anaty aterineto amin'ny fampiasàna ny tenifototra “#FreeHRDKH ” ilay fanentanana “Afaho Ireo Mpiaro Zon'Olombelona”.
Alatsinainy Mainty ho an'ireo mpiaro zon'olombelona ao Kambodza
TSY fanoherana ny govt ao Kambodza ny fitafiana mainty fa fisisihana hanomezan'ny gov fahafahana ho an'ireo mpiaro zon'olombelona (HRD)
Hatramin'ny 83 ihany koa ireo vondrona fiarahamonina sivily nanasonia  fanambaràna iray manameloka ireo fihetsiky ny governemanta Kambodziana:
Mahatsikaiky ny fahatahoran'ny governemanta ireo olona mitafy miloko. Ataon'ny manampahefana lasibatra isika satria mitafy akanjo mainty fotsiny, izay fihetsika am-pilaminana anehoana tsy fankasitrahana.
Efa telopolo taona mahery sahady no eo amin'ny fitondràna ny antokon'ny mpitondra ao Kambodza. Niampangàna  azy ny fanodinkodinana voka-pifidianana tamin'ny 2013, izay nitondra ny mpanohitra hibodo ny parlemanta. Nifarana tamin'ny Aogositra 201 ilay fibodoana, nitondra ny maro hiandrandra “kolontsaina vaovaon'ny fifanakalozankevitra” eo amin'ireo antoko politika goavana eo amin'ny firenena. Saingy tamin'ny taona lasa, nitaraina ireo mpitarika ny antoko mpanohitra noho ny antsojay politika atao azy rehefa nisy antontan-taratasy natao hanenjehana azy ireo ho nanao heloka bevava. Voatery indray i Sam Rainsy, iray amin'ireo mpitarika mpanohitra ao amin'ny firenena, hanao sesitany ny tenany mba hidifiana amin'ny famonjàna azy taorian'ny namohazan'ny governemanta (indray) ny fiampangana azy noho ny resaka fanalàna baràka.
Tamin'ity herinandro ity, nifidy nandany  ireo vesatra fiampangàna an'i Kem Sokha ny antoko eo amin'ny fitondràna, na dia misitraka ny zo tsy azo enjehana ananan'ireo parlemantera aza izy.
Ny 31 May, ny mpitondra tenin'ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana dia naneho  ahiahy momba ny toedraharaha politika ao Kambodza:
Velom-panahiana ny Sekretera Jeneralin'ny Firenena Mikambana noho ny fiakaran'ny tosidrà eo amin'ny antoko mpitondra sy ny mpanohitra ao Kambodza, indrindra fa ny fisamborana na ny fikasana hisamborana ireo parlemantera, izay manana ny zo tsy ho azo samborina. Tena zavadehibe ny rivotra tsy misy raorao hisian'ny fifanakalozana demaokratika mba hisian'ny fahamarinan-teornaa politika sy fiarahamonina milamina ary miroborobo.
Tamin'ny volana lasa, namoaka  fanambaràna miharo teny henjana ireo manampahaizana manokan'ny Firenena Mikambana momba ny tetikady fanentanana ataon'ny antoko eo amin'ny fitondràna ao Kambodza hanao antsojay amin'ny mpanohitra sy ireo mpikambana avy amin'ny fiarahamonina sivily :
Ny fitakiana tsy an-kiato ataon'ireo mpanadihady amin'ilay vehivavy tanora mba hibabohany, ny fiantehean-dry zareo amin'io mba hanombohana raharaha hafa momba ny ‘kolikoly’ hamelezana ireo mpiaro zo, hatramin'ireo fanambaràna nataon'ireo manampahefana ambony avy amin'ny fanjakàna mampiseho fa meloka ireo voampanga, amin'ny ankapobeny dia manosoka hevitra hoe ity tantara manontolo ity dia tsy misy dikany afa-tsy ny hoe fanenjehana atosiky ny resaka politika atao amin'ny fiarahamonina sivily.
Ireo iraky ny Fiombonambe Eoropeana ao Kambodza dia miantso mba hampitsaharana ny ‘antsojay ara-pitsaràna’ atao amin'ireo mpitarika ny mpanohitra sy ny fiarahamonina sivily
Ny fanentanana “Alatsinainy Mainty” koa dia misarika fanohanana avy amin'ireo mpikatroka any amin'ny firenena hafa:
Afaho daholo ireo HRD rehetra ao Kambodza
Ho firaisankina amin'ny vahoaka ao Kambodza. Ity ny #AlatsinainyMainty
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2016/06/02/83515/
 handefasan'izy ireo: https://www.cambodiadaily.com/archives/government-says-permission-needed-for-online-black-monday-protests-112877/
 nifidy nandany: http://www.khmertimeskh.com/news/25572/cnrp-seeks-king---s-help/
 dia naneho: http://www.un.org/press/en/2016/db160531.doc.htm